Fanandrinana an’i Rosia Ve Ny Tsangambato Ho an’ny Vehivavy Tsetsenina? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Septambra 2013 23:15 GMT
Tsangambatom-pahatsiarovana ny Dadi-Yurt. Pikantsary YouTube.
Tamin'ny Asabotsy 14 Septambra lasa teo, nanokana tsangambato ho an'ireo andiam-behivavy Tsetsenina maty nandritra ny fotoana hifehezan'i Rosia an'i Kaokazy Avaratra tamin'ny taonjato faha-19 ny mpitarika Tsetsenina Ramzan Kadyrov. Araka ny tantara, izay lazain'ny sasany fa nafenina, tamin'ny 1819 dia nisy vehivavy Tsetsenina 46 izay voababon'ny jeneraly rosianina Yermolov nisafidy ny hitsoraka teo an-tetezana iray miampita ny reniranon'i Terek niaraka tamin'ireo nisambotra azy, fa naleon'izy ireo maty an-drano toy izay afa-baraka.
Namoaka andian-tsarin'ny lanonam-panokanana ilay tsangambato tao amin'ny kaontiny Instagram i Kadyrov ka nanoratra [ru] hoe:
Nilaza i Akhmed Kadyrov [rain'i Ramzan] fa any amin'ny toerana tsy hanajana ny vehivavy, izay tsy miaro ny voninahiny dia tsy manabe lehilahy maotona any.
Niteraka akoralava tao amin'ny tontolom-bolongana Rosiana izany fihetsika nataon'i Kadyrov izany — jeren'ny bilaogera maro ho fanekena tsy an-kiteniteny ny famonoana miaramila rosianina, fahatsiarovana manakaiky ny fo am-polony taona taorian'ny ady farany nifanaovana tamin'ny Tsetsenina, izany toe-javatra izany.
Nitaraina [ru] ny mpisera LiveJournal DimkaJD:
Raha jerena amin'ny maha-repoblika omem-panampiana an'i Tsetsenia, dia tamin'ny vola rosianina no nananganana io tsangambato io.
Bilaogera hafa, Stbcaptain, naminany tamim-panjoretana [ru]:
Tsy ho gaga aho raha mitelina an'i tehamaina amin'ny tava io amim-pahanginana tsy misy taraina ny governemanta federaly.
Ny anankiray hafa indray nanao tamberina ny herisetra vao haingana nifanaovan'ny Rosianina sy ny Tsetsenina:
Tena ratsy tokoa izao.
Ratsy noho ny ady nifanaovana tamin'ny antsipika.
Mbola ratsy kokoa noho ny fanampiana avy amin'ny federaly, izay tahaka ny mitovy kokoa amin'izay fantatrao [naoty: “fahatsiarovana” angamba].
Mbola ratsy kokoa noho ilay Moske tsara tarehy, izay noterena ho “Sariohatr'i Rosia”.
Raha ny tena marina dia fanambaram-pijery politika izao, ao anatin'ny lasitra mametraka an'i Rosia niala tamin'ny federasiona ho lasa commonwealth ho azy.
Ao amin'ny tranonkalan'i Ekho-n'i Moskoa, namoaka matoandahatsoratra amin'ny antony nananganan'i Kadyrov tsangambato ho an'ny vehivavy maritiora ilay mpikatroka ara-tsosialy sy mpisolovavan'ny mpandala ny zon'ny voafonja Anna Karetnikova, ary nandresy lahatra [ru] fa mifanohitra amin'ny fijery ny vehivavy tsetsenina eo amin'ny nentin-drazany ny fanaovan'i Kadyrov ilay tsangambatom-pahatsiarovana:
Ny vehivavy – izay notandrovinareo nandritra ny taonjato maro. Izany no zavatra nomeko lanja indrindra tao amin'ny kolontsainareo. Fa ankehitriny izany manao ahoana? Tsy hita ilay vehivavy-reny, tsy hita ilay vehivavy mpikarakara tokantrano. Fa ny hita dia ilay namono ny tenany miaraka amin'ny hafa.
Valery Fedotov, depiote Rosiana, namoaka lahatsoratra iray tao amin'ny bilaoginy [ru] tamin'ilay lohahevitra: “Fenitra hafa indray ho an'i Tsetsenia.” Notanisainy ireo toe-javatra hafa tao anatin'ny volana vitsivitsy izay nitsarana ny Tsetsenina tamin'ny fenitra hafa tsy mitovy amin'ny an'ny olom-pirenena Rosianina. Nanao fehinteny i Fedotov:
Notononina fotsiny ho ao anatin'ny Federasiona Rosiana i Tsetsenia. Saingy mbola te-hanakipy maso hatrany [i Kremlin] raha mbola maneho fankatoavana ara-panononana an'i Moskoa, na raha ny marina kokoa amin'i Putin manokana i Kadyrov. Saingy tsy misy te-hiresaka kosa ny momba izay hitranga ao anatin'ny 10 na 20 taona. Fa mihodina ny famataranandro mandritra izany fotoana izany, ary mihamitombo ny fifanoheran-kevitra.